ETshayina Ukonga umbane ngaphandle IP65 isibane selanga esikhokelela kwindlela yokukhanyisa ezitalatweni 200W400w abavelisi kunye nababoneleli | Kasem
Ukonga umbane ngaphandle kwe-IP65 ukukhanya kwesitrato selanga okukhokelela ekukhanyisweni kwendlela 200W400w ukukhanya kwesitrato
Ubushushu boMbala(CCT): 6000K (Isivuseleli seMini)
Ubomi (iiyure): 8000
I-Voltage ye-Input(V): 6V
Isibane esiLuminous Flux(lm): 100
Inombolo yomzekelo: KAIG-04
Igama leMveliso: I-Solar Power LED Light Street
Inkonzo: OEM & ODM
uhlobo lwebhetri: 6000MAH 3.2V20AH
Iphaneli yelanga: Iphaneli yeSolar yePolycrystalline
Ukungangeni manzi: IP-65
Amandla 60w 90w
Amandla ePhaneli yePV 6v20w 6V25W
Ubungakanani bephaneli 419*330 509*330
Ibhetri 3.2V/15AH 3.2V/20AH
Umthombo wokukhanya 3030 3030
LED QTY 180pcs 270 iipcs
umbala Ubushushu 6000-7000K 6000-7000K
Usuku lwemvula 3-5 iintsuku 3-5 iintsuku
ixesha lokuhlawulisa 5-7h nguLanga 5-8h nguLanga
Ixesha lokukhanyisa 10-12h 10-12h
Indawo ekhanyayo 100㎡ 120㎡
Ubungakanani bomzimba 470*335*75 560*335*75
Iwaranti iminyaka eyi-2 iminyaka eyi-2
I-Flux ekhanyayo 100~110lm/w 100~110lm/w
Umthombo wokukhanya Bridgelux Bridgelux
0 UMTHETHO OSAYILWAYO WOMbane&GCINA AMANDLA:Oku kukhanya kwesitalato se-100w solar kudibanisa iphaneli yelanga, umthombo we-LED, kunye nebhetri ye-lithium kwisethi edibeneyo. Yamkela ukusebenza okuphezulu kwe-monocrystalline silicon photovoltaic panels,20000mAh umthamo omkhulu weLiFePO4 lithium ibhetri (ubomi ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-50,000), inokuhlawuliswa ngokupheleleyo kwiiyure ezi-4-6 kuphela, inika ixesha elide lokusebenza malunga neeyure eziyi-18-20.
3 IIINDLELA ZOKUSEBENZA:Okuzenzekelayo: Izibane zeSolar Parking lot Ngokuzilayita ngorhatya kwaye zicime ngonyezi. I-Radar : ijika kwi-100% yokukhanya kwe-2 imizuzwana xa intshukumo ifunyenwe, ibuyela kwi-30% imodi yokugcina amandla ukuba akukho ntshukumo ifunyenwe .Ixesha: Ukukhanya okupheleleyo ngexesha le-2 / 4 / 6 iiyure ebusuku, ngoko kuya kucinywa ngokuzenzekelayo.
UKUKHANYA OKUPHEZULU&INDAWO ENKULU EKHANYISIWEYO:Oku kukhanya kwesitalato seSolar Powered kuxhotyiswe nge-chip ekumgangatho ophezulu we-LED, umphumo wokukhanya uqaqambile kwaye uthambile, awukhazimli. Ifanelekile kwiiyadi ezingasemva ezingenamandla, indawo yokupaka, indawo yokudlala.
KULULA UKUFAKA:Oku kukhokelela kwisibane sesitalato akukho mfuneko yoqhagamshelo lombane. Inokuxhonywa eludongeni okanye kwipali ngokulula (Ubude obumiselweyo obucetywayo: 13-19.7ft)
I-IP65 INGQINISEKISO AMANZI&LUQINISEKILE:Ezi zibane zesitalato zenziwe nge-aluminium ehlala ixesha elide kwaye inokumelana nazo zonke iintlobo zemozulu embi yangaphandle. Ukhetho olugqibeleleyo lokukhanya kwendawo yokupaka, izikhukula, ukukhanya kweyadi, ukukhanya kweBarn.
I-90W ye-Solar LED ukukhanya kwesitrato (270 LEDs), ukonga amandla kunye nokuqina.
Isibane selanga se-LED sokukhanya kwesitalato se-IP65 sokukhuselwa kombane esingangeni manzi, esinokuqhelana nazo zonke iimeko zemozulu zangaphandle.
Xa utshintsho luvuliwe ngaphambi kokufakwa, ukukhanya kwesitalato se-LED solar kuya kungena kwimodi yokusebenza, ukukhanya kuya kuvulwa ngokuhlwa, kunye nokusa kuya kuvalwa. Ukukhanya kulungelelaniswa ngokuzenzekelayo ngokwenzwa yentshukumo.
Amandla aphezulu e-LED egcina amandla e-chip, kwaye axhotyiswe ngeepaneli ezinkulu zelanga, ukukhanya okuzinzileyo kwiiyure ze-18-20. Ibhetri ye-lithium yentsimbi ye-phosphate enkulu kunye nobomi obude beeyure ze-50,000 +.
I-90W ye-Solar Powered Street Light kunye ne-sensor yokulawula ukukhanya / intshukumo ezenzekelayo, eyenzelwe ngokukodwa ukukhanya kwangaphandle kwe-IP65 engangeni manzi kunye nobuchwepheshe obusebenzayo belanga.
Akukho tyala lombane. Uyilo lwe-All-in-one kwaye luhlawuliswe yilanga, ke iikiti zokukhanyisa azinacingo ngokupheleleyo kwaye kulula ukukhwela.
• Isixhobo sokuFakelo kunye nesibonda asifakwanga
• Shaja iiyure ezi-6-8 kwilanga elithe ngqo phambi kokusetyenziswa
• Vula iswitshi phambi kokuba utshaje kwaye usebenzise.
• Nceda ukhethe indawo ngaphandle kwekhusi elaneleyo lokukhanya kwelanga kunye nokutyhileka ngokupheleleyo
• Ubushushu bokusebenza: -4℉-140℉ (Ukuba iqondo lobushushu lingaphantsi kwe -4℉, ibhetri iya kuvula ukuzikhusela kwaye ibhetri ayinakuhlawulisa.)
Isalathisi se-LED sokuvula/ukuvala iqhosha
Emva kokufaka isibane selanga, nceda uvule iswitshi. Xa ukukhanya kwelanga kuhlawulisiwe, isibane esibomvu se-LED sivuliwe.
Ukusebenza okuphezulu kwe-monocrystalline silicon photovoltaic panels 25W, 30000mAh umthamo omkhulu weLiFePO4 lithium ibhetri (ubomi ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-50,000), inokuhlawuliswa ngokupheleleyo kwiiyure ze-4-6 kuphela, inika ixesha elide lokusebenza malunga neeyure eziyi-18-20.
Ngaphambili: iModyuli yeModyuli eNyenziweyo eDityanisiweyo yesibane seSolar esiLed isibane sesitalato
Okulandelayo: 20Hours Lightiung 300W isibane sesikhukula esiDityanisiweyo seLed Solar Street Light Outdoo